Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikunguru 16, 2020
Huwandu hwevanhu vabatwa ne Covid-19 munyika hwakwira kusvika pachiuru nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1 089, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevashanu vaine chirwere ichi.
Vanachiremba vakuru vari pasi pesangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vanopa hurumende mazuva gumi nemana ekugadzirisa zvinhu muzvipatara pamwe nemihoro yavo, kukundikana kwayo, voramwa mabasa.
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vanoparura hurongwa hwebhajeti yepakati pegore.
Vari kukokera hurongwa hwekuratidzira musi wa Chikunguru 31, VaJacob Ngarivhume, vanoti hurongwa hwavo huchaenderera mberi zvisineyi kuti hurumende iri kuti kuita izvi kunenge kuchityora mitemo yeCovid-19 National Lockdown Regulations.
Dare redzimhosva rinoti mupurisa ari munyaya iri kupomerwa vatori venhau vaviri, Frank Chikowore naSamuel Takawira, ngaasungwe sezvo atadza kuuya kudare nhasi.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisadambudziko reCoronavirus iro riri kuramba richikura munyika